अर्जेन्टिनामा कोरोना भाइरसः कति पुग्यो संक्रमित र मृतकको संख्या ?
एजेन्सी । अर्जेन्टिनामा पनि कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म अर्जेन्टिनामा १०५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै झण्डै २ हजार ५०० जना संक्रमित रहेका छन् ।
ओरालो लागेको अर्जेन्टिना कतै कतारसँग पनि पराजित हुने त होइन ?
एजेन्सी । सन् २०१४ को विश्वकपमा लागेको थियो अर्जेन्टिनाले उपाधि जित्छ । तर, स्ट्राइकरहरु चुकेपछि फाइनलमा जर्मनीसँग पराजित हुन पुग्यो । सन् २०१५ को कोपा अमेरिका फाइनलमा चिलीसँग अर्जेन्टिना पेनाल्टीसुटआउटमा पुग्यो । सोही नियती सन् २०१६ को विशेष कोपा अमेरिका कपमा पनि देखियो ।
यी हुन् कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनाका २३ खेलाडी
एजेन्सी । ब्राजिलमा हुन लागको कोपा अमेरिका २०१९ को लागि अर्जेन्टिनाले २३ सदस्यीय खेलाडी सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा स्टार खेलाडी लियोनल मेसी पनि परेका छन् । हाल अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टिममा लियोनल स्कोलानी प्रशिक्षकको रुपमा छन् ।
अर्जेन्टिनामा भएको विश्वकप फुटसलमा नेपालले एउटा खेल पनि जितेन
काठमाडौँ ।अर्जेन्टिनामा जारी १२आँै संस्करणको विश्वकप फुटसलमा नेपाल तीनवटै खेलमा पराजित भएको छ । समूह चरणकोअन्तिम खेलमा बिहीबार राति नेपाल क्याटलोनियासँग ११–१ को भारी गोल अन्तरले पराजित भयो । नेपालका लागि एक मात्रै गोल सुजन बलामीले गरेका थिए ।
आईकार्डी र डिबालाको गोलमा अर्जेन्टिना विजयी
काठमाडौं । केहीबेरअघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाले मेक्सीकोलाई हराएको छ ।
अर्जेन्टिनाले इराकलाई ४–० गोलले हरायो
काठमाडौं । बिहीबार राति सम्पन्न मैत्रिपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाले इराकलाई भारी गोल अन्तरले हराएको छ । स्टार खेलाडीबीना उत्रेको अर्जेन्टिनाले इराकलाई ४–० गोलले हराएको हो ।